नेपालीबाटै कुवेतमा बेचिएकी नेपाली चेलीको चीत्कार ‘मलाई यहाँबाट निकाल्नुस’ – Hamrai Sajha Patrika
नेपालीबाटै कुवेतमा बेचिएकी नेपाली चेलीको चीत्कार ‘मलाई यहाँबाट निकाल्नुस’
By हेमन्त न्यौपाने	 On २०७६, २४ असार मंगलवार ११:३९
काठमाडौं, असार २४ । नुवाकोटको महाकाली वडा नम्बर ८ की अनु तामाङ कुवेतमा बेचिएकी छन । ५/६ महिना अघि दलालको प्रलोभनमा परि भारत हुँदै कुवेत पुगेकी तामाङलाई अहिले शारीरिक तथा मानसिक यातना भोगिरहेकी छन । राम्रो पैसा सहितको राम्रो काम पाउने आशामा कुवेत पुगेकी तामाङ अहिले आफुलाई उद्धार गर्न पनि अपिल गरिरहेकी छन । उनले फेसबुकमा भिडियो सार्वजनिक गर्दै आफुलाई तत्काल निकाल्न गुहार मागेकी छन ।
उद्धारका गरिदिनु भनी रुँदै अनु तामाङ ।
नेपालीबाटै बेचिन पुगेकी उनलाई घरमा काम गर्ने शाहुले बन्धक बनाई यातना दिने गरेको बताएकी छन । हाल भारतमा बस्दै आएका मानवतस्कर रमेश खत्रीले उनलाई कुवेत पुर्याएका हुन । खत्रीले यसरी नै थुप्रै नेपाली चेलीहरुलाई विभिन्न प्रलोभन देखाउदै कुवेत पुर्‍याउदै आएका छन । मानवतस्कर खत्रीको ठुलो गिरोह गरेको कुवेतमा बेचिएकी अनु तामाङ बताउछिन । युवतीहरुलाई कुवेत पुर्‍याईसकेपछी उनीरुलाई कहाँकहाँ पुर्‍याउने भनी जिम्मा गिरोहकी रिता नाम गरेकी महिलाले लिने गरेकी छन । मानवतस्करकी कुवेत स्थित एजेन्ट रिताले त्यहाँका साहुहरुलाई नेपाली युवती बेच्ने गरेकी छन ।
उनको यो चीत्कारलाई चलचित्र निर्देशक तथा हाम्रै साझा पत्रिकाका रंगपत्रकार जिबि आग्रीले बिषय उठाएका छन । उनले सरकारका विभिन्न अंगहरुमा बिषयबारे जानकारी गराए तर सरकारी निकायबाट चासो दिएको पाईएन । उनलाई तत्काल उद्धार गरिएन भने उनलाई ज्यानको समेत खतरा रहेको छ ।
उनको रिहाइका लागि सरकारलाई दबाब सृजाना गराउन अनु “तामाङ उद्धार अभियान” #anu_tamang_uddhar_abhiyan नामक ह्यासट्याक सहितको अभियान सुरु भएको छ । यसमा तपाईंपनि सहभागी भएर सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ ।
दिनानुदिन नेपाली चेली बेचिहँदा समेत सरकारले खास कदम चाल्न सकेको पाइदैन । मानवबेचविखन रोक्नका लागि खोलिएका सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरुले समेत यस कार्यमा उल्लेख काम गरेको पाइदैन ।
सम्पादकीय/के हाम्रो राष्ट्रवाद ओईलिएको हो ?
आजको_राशिफल, वि.सं . २०७६ आषाढ २५ गते बुधवार
हुलाकी सडक प्रकरण: सिमामा पहरेदार भएर सडक निर्माण सम्पन्न गराउँछौ- पुर्व मन्त्री लाल बहादुर विश्वकर्मा २०७६, २४ असार मंगलवार ११:३९
मातृभूमि रक्षाका लागि एकै दिन कञ्चनपुरमा सशस्त्र प्रहरीका ‘चार बिओपी’ स्थापना । २०७६, २४ असार मंगलवार ११:३९
नेपालमा भारतीय न्युज च्यानलको प्रसारण रोकियो २०७६, २४ असार मंगलवार ११:३९
भारतको वकालत गर्ने सरिता गिरीको सांसद पद चैट । २०७६, २४ असार मंगलवार ११:३९
रोकिएन भारतको दादागिरी: हातहतियार सहित नेपाल प्रवेश गरेर हुलाकी रोड निर्माणमा अवरोध । २०७६, २४ असार मंगलवार ११:३९